Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) - Hello Sayarwon
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ)
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) ကဘာလဲ။
နီကိုတင်းဆိုတာ ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ စွဲလမ်းစေတဲ့ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ နီကိုတင်းရဲ့ ဦးနှောက်အပေါ်မှာ ရှိတဲ့သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကတော့
· စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေခြင်း
· စိတ်တိုလွယ်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း
· အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ရေတိုမှတ်ဉာဏ်ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း
· အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
နီကိုတင်းဟာ အခြားအရက်၊ ကိုကင်း၊ မော်ဖင်းတို့လို စွဲလမ်းစေတတ်ပါတယ်။
ဆေးရွက်ကြီးမှာ နီကိုတင်းအပြင် ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းပေါင်း၇၀ခန့် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့် ဆေးလိပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ နှစ်စဉ်ဆေးလိပ်သောက်သူ သန်းနဲ့ချီပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများဟာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကို ပိုပြီးခက်ခဲစေပါတယ်။ စွဲလမ်းစေတဲ့အရာတစ်ခုကို မသုံးတော့ဘဲ ရပ်တန့်လိုက်လျှင် ပေါ်လာတဲ့ အခံရခက်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါတယ်။
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ထိုလက္ခဏာများကို ဆေးရွက်ကြီးနောက်ဆုံးသုံးပြီး ၃၀မိနစ်အကြာက စပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်ဘယ်လောက်အထိ စွဲနေသလဲအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရွက်ကြီးသုံးတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ တစ်နေ့ဘယ်လောက်သုံးသလဲ စတဲ့အချက်တွေအပေါ် မူတည်ပြီး ရောဂါပြင်းထန်မှု ကွာခြားပါတယ်။
· နီကိုတင်းကို အပြင်းအထန်တောင့်တခြင်း
· ခြေလက်များ ထုံကျဉ်ခြင်း
· ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်ရစ်နာခြင်း
· ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း
· အာရုံစူးစိုက်ရ ခက်ခဲခြင်း
· ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေဟာ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း အထွတ်အထိပ်ရောက်လာနိုင်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အချို့လူတွေကတော့ လအနည်းငယ်ထိ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ နီကိုတင်းကြောင့် စွဲလမ်းစေခြင်း ဖြစ်တယ်။
ငါ့ဆီမှာ Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Nicotine withdrawal (နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာမယ့်လက္ခဏာတွေကို စီမံဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးရပါမယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ကို ဆေးညွှန်းခြင်း၊ အနီးအနားရှိ ဆေးလိပ်ဖြတ်ကူညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နီကိုတင်းဖြတ်ပြီး ခံစားရတဲ့လက္ခဏာများအတွက် ကုသနည်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ နီကိုတင်းအစားထိုး ပီကေများ၊ ပလာစတာများ၊ ဆရာဝန်ဆေးစာနဲ့ဝယ်ရတဲ့ ရှူဆေးများ၊ နှာခေါင်းဖြန်းဆေးများဟာ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲက နီကိုတင်းပမာဏကို တဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချပြိး ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေပါတယ်။
Zyban, Chantix တို့ကဲ့သို့ နီကိုတင်းမပါသော ဆေးများ ညွှန်းခြင်းဖြင့်လည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။
သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေလျှင် အခြားဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူများဆိက အကူအညိရနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ် အစီအစဉ် / ကူညီရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သင်အောင်မြင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
သင်ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် ဆေးလိပ်ဖြတ်နေစဉ် တလျှောက်မှာ တချိန်ချိန်တော့ ဒီလက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်ဆေးလိပ်လုံးဝပြတ်ဖို့အတွက် ဒီလက္ခဏာတွေကြောင့်တော့ လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသော လက္ခဏာများကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
နီကိုတင်းဟာ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွစေတဲ့အတွက် သင်ဟာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသယောင် ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဆေးလိပ်မရှိလျှင် သင်ဟာ အတန်ငယ်စိတ်ဓါတ်ကျသလို ဖြစ်လာပါမယ်။ တစ်နေ့မိနစ်၃၀ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သဘာဝအတိုင်း နေထိုင်ကောင်းစေတဲ့ အန်ဒေါ်ဖင်ဓါတ်များ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း ထွက်လာပြီး စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်းတို့ကို ပျောက်စေပါတယ်။ အိပ်လို့လည်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ အိပ်ခါနီးလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်လျှင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင် သုံးလေးနာရီခန့် အနားယူချိန်ပေးပါ။
နီကိုတင်းစွဲလန်းခြင်းက ရုန်းထွက်ဖို့ ခန္ဓါကိုယ်မှာ အပြောင်းအလဲအများကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်နေစဉ် အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လယ်ခင်း တရေးတမောအိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် စောစောအိပ်ရာဝင်ပါ။ သင်အိပ်ပျော်နေစဉ် သင့်ခန္ခါကိုယ်က အဆိပ်အတောက်ဖြေတဲ့ လုပ်ငန်းများလုပ်နေပါတယ်။
အချို့လူတွေဟာ နီကိုတင်းကို တောင့်တမှုကို အစာစားခြင်းနဲ့ အစားထိုးဖြေဖျောက်ကြလို့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာပါတယ်။ ဝမှာကြောက်ပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အချိန်ဆွဲနေသူများလည်း ရှိပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကို တောင့်တလာလျှင် အစားအစာမဟုတ်တဲ့ အခြားအာရုံပြောင်းစရာကို ရှာပါ။ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ အင်တာနက်ကြည့်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းတို့ လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ရဲ့ ဖြားယောင်းမှုကို ရှောင်နိုင်ပြီး အခြားစိတ်ကူးများနဲ့ အလုပ်များနေစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
သင့်မိတ်ဆွေနှင့် မိသားစုများကို သင့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ အသစ်ကို လေးစားသောအားဖြင့် သင့်အနားမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရန် ပြောပါ။ သင့်အိမ်၊ သင့်ကားထဲမှာမဟုတ်ဘဲ အပြင်မှာသွားသောက်ဖို့ တောင်းဆိုပါ။
စိတ်ဖိစီးလာတဲ့အချိန် ဆေးလိပ်ကို အဖော်ပြုတယ်ဆိုတာ အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီ။ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပိုမိုကျန်းမာသော နည်းလမ်းများနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ခြင်းစတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများဟာ နီကိုတင်းတောင့်တခြင်းကို စိတ်မရောက်စေဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း၊ တရားထိုင်ခြင်းဟာ သင့်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို အပြုသဘောနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေဖျောက်နိုင်စေပါတယ်။ သင့်အတွက်နည်းလမ်းကောင်းကို တွေ့ထားပြီးလျှင် စိတ်တိုတိုင်း ထိုသို့လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနှင့်။
သင့်ရဲ့ နီကိုတင်းဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခံစားရသည့် လက္ခဏာများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါ။ သင်ပေးနေတဲ့ ဆင်ခြေတွေကိုလည်း ပြောပြပါ။ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်နဲ့တော့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး။ ဆေးလိပ်ကို အရမ်းတောင့်တနေလို့ ဒီတစ်လိပ်တော့ သောက်လိုက်မယ်။ စသဖြင့်။
သင့်မိတ်ဆွေက ဆေးလိပ်ဖြတ်စီမံကိန်းကို ပျက်စီးစေမယ့် သင့်လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို ထောက်ပြပြီး ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို ကျော်လွှားဖို့ ကူညီအားပေးပါလိမ့်မယ်။
Nicotine withdrawal. https://www.healthline.com/health/smoking/nicotine-withdrawal#treatment3. Accessed November 1, 2017
Nicotine withdrawal. https://www.healthline.com/health/quit-smoking-nicotine-withdrawal. Accessed November 1, 2017